म अझै अखबारमा सदस्यता लिन सक्दछ यदि ... | Martech Zone
म अझै अखबारमा सदस्यता लिन सक्छ यदि…
शुक्रबार, जुन 15, 2007 शनिबार, अप्रिल 16, 2016 Douglas Karr
तपाईंहरू मध्ये केहीलाई मेरो पृष्ठभूमि थाहा छ भनेर म बुझ्छु कि मैले एक दशक भन्दा बढि समाचार पत्र उद्योगमा काम गरें। मेरा सबैभन्दा ठूला उपलब्धिहरू उद्योगमा थिए, दुबै व्यावसायिक र प्राविधिक रूपमा। यसले मलाई दुःखी बनाउँदछ कि अखबारहरू विलुप्त हुँदैछन् ... तर मलाई लाग्दैन कि यो मृत्यु हो, यो वास्तवमै आत्महत्या हो।
समाचारपत्रहरू क्लासिफाइड हिँड्दा हेरिएको थियो eBay र Craigslist। अहंकारी, तिनीहरूले आफ्नो केहि नाफा लिन र अनलाइन लिलामी वा वर्गीकृत मा लगानी गर्न सोचेनन्। यसको बारेमा अचम्मको कुरा यो हो कि उनीहरूले अन्तिम कार्ड राखेका थिए - भूगोल। समाचारपत्रहरूले एक क्षेत्रीय समाधानमा अनलाइन क्लासिफाइड ट्याप गर्ने तरिका फेला पारेको छ, मलाई लाग्छ कि उनीहरूले त्यसो गर्न सकेको हुन सक्छ। अब धेरै ढिलो भयो ... प्रत्येक सफल अनलाइन वर्गीकृत प्रणालीको यसमा क्षेत्रीय कम्पोनेन्ट हुन्छ।
त्यसो भए म कसरी अझै एउटा समाचार पत्रको सदस्यता लिन सक्छु?
यदि तिनीहरूका प्रकाशकहरूले एपी बकवासको भार तान्न रोक्दछन्, तिनीहरूका सम्पादकहरूले सम्पादन गर्न बन्द गरे, उनीहरूले स्थानीय प्रतिभालाई छोडिदिए, र तिनीहरूले आफ्ना संवाददाताहरूलाई स्वतन्त्रता दिन थाले। अर्को शब्दहरुमा - यदि उनीहरू 'तल्लो रेखा' लाई लागू गर्ने बारे बेवकूफ हुन छोडे र उनीहरूसँग भएको प्रतिभाको सदुपयोग गरे, म तिनीहरूको लागि हुँ।
प्रमाण? पढ मात्र रुथ होलोदयको ब्लग जब तपाइँले मौका पाउनुहुन्छ। मैले स्थानीय अखबारमा केही वर्ष काम गरें, दिनहुँ कागज पढें र रूथलाई वास्तवमै मलाई चिनेन। तर पछिल्लो बर्षदेखि म उनको ब्लग पढ्दै छु र यसले मलाई टाढा उडाउँदछ। उनको निष्ठा, ईमानदारी, कुटिलता, र कथामा पुग्न पूर्ण उत्कटता यस्तो चीज हो जुन मैले स्टारको लागि लेख्दा कहिले पनि चिनेन। वास्तवमा मलाई थाहा थिएन कि उनी को स्टारमा थिइन!
उनीहरूले कसरी उनको प्रतिभालाई विस्फोट गर्नबाट जोगाए मलाई कुनै विचार छैन ... म केवल अनुमान लगाउन सक्छु यो राजनीति र सम्पादन हो। मैले लेखहरू पढें IndyStar अब र ती मध्ये धेरैले पुलिस रिपोर्ट वा श्रवणशक्ति जस्तो पढ्छन् ... कुनै जीवनमा उनीहरूको जीवन हुँदैन। यसले मलाई बौलाहा बनाउँदछ कि उनीहरूले यो देख्न सक्दैनन् र यस बारे केही गर्छन्।
मसँग एक मालिक र सल्लाहकार थिए, स्किप वारेन, धेरै समय अघि। उनले भने कि कर्मचारीहरु सँधै तिमीलाई चकित पार्ने छन् यदि तपाईंले उनीहरूलाई सफल हुने अवसर दिनुभयो। यो अखबारमा फरक छैन। दानव निगमहरू, राजनीति, र मध्यम व्यवस्थापनले अखबारलाई नष्ट गरेको छ। रूथको ब्लगले गति निर्माण गर्न जारी राख्नेछ ... र समाचार वाचकको जो कोहीले पनि यी पूर्व-अखबारका पत्रकारहरू फेला पार्नेछ र उनीहरूको ब्लगहरू पढ्न थाल्नेछ!
रूथसँग उसको स्टारमा राख्ने प्रयास गर्न विज्ञापन बजेट छैन, तर कुनै चिन्ता छैन - मलाई लाग्छ कि स्टारको साइटले आफ्नो आन्तरिक प्रतिभालाई पर्याप्त मात्रामा मार्नेछ जसले मानिसहरूलाई रूथ जस्ता थप जानकारीपूर्ण साइटहरूमा धकेल्छ! मैले भित्रका मानिसहरूबाट सुनेको छु कि स्टारको साइटको बृद्धिका क्षेत्रहरू वास्तवमै प्रयोगकर्ताले उत्पन्न गरेको सामग्री, कोन (स्थानीय) समाचार, र ब्लगिंगको वरिपरि केन्द्रित छन्। हु! कल्पना गर्नुहोस् कि!
टैग: indianapolis सिताराइन्डी स्टारअखबार
म उसको बिना हराएको छु
धेरैले मलाई डग भन्छन, आज यो ड्याड थियो
जुन २,, २०१ बिहान :15:२२ बिहान
तपाईलाई डग थाहा छ, म यो बिर्सिदिनँ कि मान्छेले अझै अखबार पढ्छन। मलाई थाहा छ कि अनौंठो लाग्छ, तर मसँग यति लामो समय भएको छ, कि मेरो सन्दर्भको फ्रेम परिवर्तन भएको छ।
जब ती बिक्री मानिसहरू घर-घरमा ढोका बिक्री बिक्रीमा आउँदछन्, मँ जान्दछु कि उनीहरूले मलाई आइसबक्सको लागि ब्लक किन्नु पर्छ वा मेरो घोडाविहीन गाडीका लागि केही पेट्रोलियम डिस्टिलेटको आवश्यक छ कि भनेर सोध्यै।
एक नजरले "... साँच्चै… मान्छे अझै पनि त्यसो गर्छन्?" 🙂
जुन 15, 2007 मा 12: 25 PM
मलाई थाहा छ तपाई के भन्न चाहानुहुन्छ टोनी। गुगल फिड्रेडरले मेरो अखबार सदस्यता पूर्ण रूपमा बदलेको छ। मैले अझै केही म्यागजिनहरू पढेको छु ... हुनसक्छ प्रतिभा सरेको छ। र म एक किताब नट हुँ। मलाई लाग्छ कागजको गन्ध र भाव मलाई अझै प्राकृतिक छ।
के म सबैभन्दा मिस गर्छु प्रतिभा हो, यद्यपि ... त्यो हो जुन म वास्तवमै भन्न खोजिरहेको थिएँ। मलाई आशा छ कि पत्रकार अधिक र अधिक ब्लगिंग मा बदलिनेछन् (अखबारहरु बाहिर उनीहरुले काम गर्छन्)। वास्तवमा, मँ 'प्रायोजित' ब्लगिंग साइटहरू वास्तविक पत्रकारहरूको साथ हेर्न चाहन्छु जुन उनीहरूको लेखन लिन सक्ने कुनै सीमा छैन।